SARIN'NY FIOMPIANA ALIKA GOLDEN RETRIEVER, 2 - ALIKA
Golden Retrievers, Dakota amin'ny 2 taona miaraka amin'i Daisy Mae toy ny alika kely 12 herinandro
Rosie the Golden Retriever tamin'ny faha-4 taonany nitsangana teo amin'ny dabilin'ny valan-javaboary
shih tzu zanak'ondry Spaniel
Gabby the Golden Retriever toy ny alika kely amin'ny 2 volana avy any India— 'Natsangako ho zanany izy tamin'izy 1 volana. Tamin'ny lanjany 2 volana dia nilanja 7 kg (15 pounds).
Gabby the Golden Retriever toy ny alika kely amin'ny 2 volana avy any India
'Ity ny CJ Volamenantsika. Alika tena marani-tsaina izy ary vao 7 volana amin'ity sary ity. Fantany ny anaran'ireo kilalao 10 rehetra tao aminy, tia milalao baolina, manenjika bunnies, dia namantatra ny fomba hanokafana ny vavahady biby fiompy ao an-trano ary tamin'ny herinandro lasa dia hitany ny fomba fanokafana ny tranon-kenany ivelany ary nihazakazaka nanerana ny manodidina izy. rehefa tonga avy niasa izahay. Tena be fandavan-tena izy ary tia manao izay hetsika atao amin'ny fianakaviany mandritra ny andro. Nahazo namana haingana dia haingana niaraka tamin'ny alika sy ny ankizy rehetra manodidina izy, fa ny sakaizany no namantsika Springer Spaniel Mpihady Vaky tampoka ny tranony tao anatin'ny roa herinandro teo ho eo, nefa mbola manana fotoana fohy ihany, 'Faly be aho, tsy tantiko intsony intsony rehefa mahita loza vaovao aho'. Tsy mbola nanandrana mitsako na inona na inona tao an-trano izy raha tsy hoe azo hanina, fa tiany hilelaka ny zava-drehetra eo imasony. Tiany ny mihady sy mitsako tongotra, fa eo am-panatanterahana izany izahay. Mametraka boaty fasika isika amin'ity fahavaratra ity any an-tokotany mba hitrandrahany sy hamadihana ny fitsakoana tongony ho lalao mahafinaritra 'manala ny ba kirarontsika'. Mipetraka ao North Dakota ao amin'ny tanàna kely iray izahay ary manana tany tokony ho antsasaky ny hektara hohaniny. Raisintsika izy mandeha isan'andro raha tsy mangatsiaka mangatsiaka be ary avelantsika handositra ny tadiny amin'ireo tongotra ireo izy (mipetraka amin'ny tanàna kely iray izahay ary manodidina ny 5 sahabo eo ho eo ny manodidina azy). Tiany ny milalao hazandrano ao an-trano ary miafina sy mitady amintsika rehefa tsy eo ivelany izahay. Ny an'ny mpiara-monina amintsika ihany no halany kilalao (Tsy azoko antoka ny tena karazany) ary hiery ao aorinanay isaky ny mandingana ny tokotanin'izy ireo izahay. '
'Sam, ny Goldie-ko dia 3 volana eto. Izy no sakaiza kely tsara fanahy indrindra tadiavin'olona. Raha 'mitomany' toy ny alika ianao dia tsy tantiny ary tokony hilelaka anao amin'ny tavanao rehetra. Raha faly aho dia mirohondrohona toy ny angidimby ny rambony. Lalao ho an'ny zavatra rehetra izy, tamin'ny voalohany tamim-pitandremana (nilomano, alika be , asparagus), ary mihazakazaka rehefa miteny aho ' Avia aty '- ilay alika voalanjalanja indrindra nananako. Tahaka ny fampianaran'i Cesar dia tsy maintsy nampahafantariko azy hoe iza no sefo tamin'ny voalohany nimenomenona tamiko niaraka tamin'ny taolana teo am-bavany . Hatramin'izay dia faly izy mizara ny harenany miaraka amiko. Mahazo mihazakazaka any an-tokotany izy amin'ny fotoana rehetra tadiaviny, ary indrindra ny fitiavany ny farihy Frank, izay alainy avy any anaty rano sy hikororohany amin'ny lalana.
Midas ilay Golden Retriever madio amin'ny faha-7 taonany, milanja 90 lbs.- 'Midas no nantsoinay hoe Midas avy amin'ny angano Mpanjaka Midas, izay nikasika na inona na inona ary nivadika ho volamena. Ity dia sarin'i Midas nandry tamin'ny hoditra fotsy leoparda. '
Charlie the Golden Retriever toy ny alika kely mandritra ny 3 volana
Charlie the Golden Retriever amin'ny maha-alika alika azy mandritra ny 9 volana
Indy ilay Golden Retriever lahy tamin'ny 11 volana sy 32 kg (32 kg) dia natsangana tao amin'ny SPCA teo an-toerana satria nilaozana izy. Nilaza ny tompony fa be filalaovana izy, manan-tsaina ary afaka herinandro monja dia efa mpiambina ny trano izy !!!
Bailey toy ny alika kely amin'ny 5 volana mitsako ny taolany
'Max ity. Nalaina ireo sary ireo fony izy tokony ho herintaona. Tsy mbola nankeny amoron-dranomasina izy talohan'izay ary natahotra ny rano! Mainty amin'ireto sary ireto ny orony, fa nivadika mavokely izy taorian'ny ririnina voalohany! '
Max the Golden Retriever toy ny alika kely eny amoron-dranomasina manandrana mamantatra ny rano mihetsika
Kuma ilay mena aka volamena mainty miloko Golden Retriever mitsambikina eo am-bavahady
'Ity i Rex, Golden 3 volana, 37 kilao. Ny sary voalohany dia i Rex amin'ny maha-zazalahy tsara tarehy azy ny faharoa dia maina izy taorian'ny nandroany. Tiany ilay mpanamory satria ririnina izy io ary mitazona azy tsy hangatsiaka. '
Maggy the Golden Retriever mandeha milomano ao anaty rano
Nianjera tamin'ny fandriana i Cody!
Fampahalalana momba ny Golden Retriever
Sary Golden Retriever 1
Sary Golden Retriever 2
Sary Golden Retriever 3
Sary Golden Retriever 4
Sary Golden Retriever 5
Sary Golden Retriever 6
Alika Golden Retriever: Sarivongana Vintage azo angonina
anglisy antsasaky ny tapany Amerikana bulldog
alika inona no manana lela mainty
Jack Russell Terrier sy Corgi mix
fifangaroan'ny omby any Australiana collie mix
maninona ny alika sasany no manana orona mavokely